Youtube inodzokorora - Zviri nyore loop Youtube mavhidhiyo - Teerera kumimhanzi pasina kukanganisa
Loop uye Kudzokorora Youtube Videos
Replay Youtube mavhidhiyo musina kudzvanya ekutsiva
Loop YouTube mavhidhiyo nenzira iri nyore. Uchishandisa YouTube Loop unogona kudzokorora vhidhiyo yakazara kana kusarudza chikamu chayo, tsvaga paYouTube, tanga mavhidhiyo akawanda panguva imwe chete!
Tsvaga kana kuita Youtube Kudzokorora.
Dzokorora zvizere kana chikamu cheYou mavhidhiyo uchishandisa YouTube Loop
Youtube Repeater inobvumira chero munhu kuti asunungure YouTube mavhidhiyo kana yakarongwa zvikamu zvemavhidhiyo nekungodzvanya mashoma kwegumbo. Asingodzokorore kudzokorora mimhanzi yemavhidhiyo, zvinosetsa vhidhiyo zviono, kana inonakidza mavhidhiyo akadai spoto kana masaizi, uye igovera iwo neshamwari dzako!
Maitiro ekuisa YouTube vhidhiyo pane kudzokorora
Izvo zvinobatsira YouTube vhidhiyo mune isingagumi loop
∞ Paunotarisa vhidhiyo yekuraira yeYouTube uye iwe unofanirwa kutarisa imwe chikamu chayo kazhinji uye zvakare.
∞ Kana iwe uchinge wanzwa mimhanzi iri kupindwa muropa yekuteerera zvakare uye nekudzokorora ...
∞ Kana iwe uchifanira kutarisa iyo inosekesa vhidhiyo yeiyo 1000 nguva pasina kuita nechigadzirwa.
∞ Paunenge uchida kutarisa YouTube mavhidhiyo pasina kushambadzira.
Youtube Dzokorora Bhatani
Tora Youtube Dzokorora Bhatani reC Chrome, Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge.
∞ Dzokorora Youtube ← Dhonza izvi kune ako mabhukumaki ebha
Hausi kuona here mabhukumaki mabha? Press Shift+Ctrl+B
Kana uchishandisa Mac OS X, Press Shift+⌘+B
Kana, kopira kodhi iyo yose pazasi pezvinyorwa bhokisi wobva waiisa kune yako mabhukumaki ebha.
❝Iyi script inobatsira iwe pachako loop YouTube mavhidhiyo.❞
Ona skrini pazasi
Kuti uwane zviri nyore, Bhukumaka isu!
Press Shift+Ctrl+D. Kana uchishandisa Mac OS X, Press Shift+⌘+D
Uchishandisa YouTube Loop iwe unokwanisa
Dzokorora, Cheka uye Loop
Roop yakazara YouTube mavhidhiyo kana isa zvikamu zvaro pakudzokorora, ipapo igovera chisikwa chako neshamwari!
Dzokororai mavhidhiyo eYouTube otomatiki (kana zvikamu zvawo, zverimwe nyaya)
Tarisa vhidhiyo yako yaunofarira yevhidhiyo kakawanda musingamanikidzi kudzokorora.
Crop, Cheka chekusingaperi Chiuno
Gadzira Lop, rima yako yaunofarira chikamu chevhidhiyo ipapo tamba izere kana zvikamu zveYouTube mavhidhiyo mune risingaperi loop.
Shongedza nguva ye loop yako (kutanga / magumo)
Tsigiro yeYouTube nguva parameter.
Gadzira yako Playlists pasina kupinda.
Backup kana kudzorera playlists.
Youtube inodzokorora playlist, shuffle kana kudzoreredza Youtube playlist.
Dzora iwo akaremerwa YouTube mavhidhiyo.
Tarisa Youtube mune yakazara skrini isina kushambadzira pakombuta uye smartphone.
Otomatiki otomatiki kukodzera chidzitiro mudziyo
Kurumidza Kumhanyisa kana Kunonoka
Dzora pasi nziyo dzeMoses kana kumhanyisa mavhidhiyo.
Wedzera bhatani bhatani kuchiratidzo.
Shandura zita remusoro usati wagovana.
Optimised mushandisi ruzivo
Tsvaga mavhidhiyo eYouTube nenzira yakasununguka.
Tsigira Mapuratifomu Ese Anodiwa
Unogona kushandisa YouTube Looper pane chero ipi zvayo yaunofarira seWindows mudziyo, Linux OS, Mac muchina, Chromebook, Android, kana iPhone, iPad, Smart TV.
Kukurumidza uye kusununguka kwete kutsamwa.
Izvo zvakasununguka pamhepo service yekushandisa.
Hapana maakaunti, hapana downloads, mimhanzi chete.
Tinyoresetse Youtube mavhidhiyo - Teerera kumimhanzi pasina kukanganisa
Maitiro Ekudzoreredza Iwe Nemavhiki Mavhidhiyo
Pane nzira dzekuenda dzakatenderedza YouTube kudzokorora zvinodzora
Tsvaga yako vhidhiyo yaunofarira kana isa URL yeYouTube (kana vhidhiyo ID) yevhidhiyo iwe yaunoda kudzokorora mubhokisi rekuisa riri pamusoro. Kana kushandisa Youtube kudzokorora trick pazasi.
Tsiva tsamba t netsamba x mune yewebhu domain wobva wadzvanya Enter. Vhidhiyo yako inozodzokorora mune chiuno zvichiramba zvichienderera.
- Nguva zhinji vhidhiyo inowanikwa pane Youtube
- Shanduro yeselula
- Nyika zvinongedzo (uk, jp, ...)
- Yakapfupiswa URL
Maitiro Ekuita YouTube Vhidhiyo Inotamba Ichiramba
YouXube inobvumidza iwe kugadzira iyo Loop yekudzokorora vhidhiyo yakazara kana chikamu chaicho cheiyo. Kuti ugadzire Loop iwe unogona kusarudza vhidhiyo mune imwe yenzira dzinotevera:
Nhanho yekutanga: Sarudza vhidhiyo
Kubva ku URL
Kudzokorora YouTube mavhidhiyo, ingoisa URL yevhidhiyo yeYou munzvimbo yekutsvaga.
Kubva pakutsvaga kwekutsvaga
Kana iwe usina chokwadi cheiyo vhidhiyo yaunoda kuRop, iwe unogona kutsvaga yeYou mavhidhiyo. Mune peji rinotevera iwe unowana zvawanikwa zvekutsvaga kubva pauri iwe zvaunogona kusarudza yako yaunofarira vhidhiyo.
Nhanho yechipiri: Cheka
Loop vhidhiyo yeWhatsApp pakati pefrimu nguva
Sarudza kutanga / kupera
Paunenge uchinge watora vhidhiyo yako, unogona kuchinja nguva yekutanga uye yekupedzisira. Ingo dhonza kutanga uye wapedzisa zviratidzo kusvika kunguva dzaungade. Iye zvino unogona kudzokorora ako aunofarira YouTube mavhidhiyo.
Nokusarudzika, nguva dzekutanga / dzekupedzisa inguva yekutanga / yekupedza yevhidhiyo.
Nhanho yetatu: Gadzirisa musoro wevhidhiyo
Ipa zita rekuti loop
Iwe unogona zvakare kutumidza Loop kune chero chaunoda. Vhura loop yakachengetedzwa, chinja zita uye tinya Bhatani bhatani.
Nhanho yechina: Sarudza vhidhiyo zvigunwe
Iwe unogona kugovera yako evhoti YouTube mavhidhiyo pane ako aunofarira emagariro midhiya senge: Facebook, Twitter, Pinterest, email, uye kunyange WhatsApp kana mameseji meseji.
Usati wagovana, gadzira ino fanika Youtube icon mufananidzo yemavhidhiyo ako kuti aite vanhu vanonakidza.
Kuti ushandise YouTube Loop unofanira kunge uine HTML5 inoenderana browser.
Mibvunzo Inowanzo Bvunzwa ✉
Tsvaga Mibvunzo Newe Mhinduro Pano - Sei Kuti Udzorere Youtube Mavhidhiyo?
+ Chii chinonzi YouTube Loop?
Icho chishandiso chewebhu chinoridza mavhidhiyo eYouTube mune isingagumi loop, zvinoreva chii: vhidhiyo inotanga zvakare otomatiki pasina kupindira mushure mekusvika kumagumo.
+ Kudzokorora kana kusunungura mavhidhiyo?
Kuwana vhidhiyo yeYouTube yekudzokorora pane chiuno kunganzwika sebasa rakakosha, asi zvinoshamisa kuti zvakaoma kuita uye zvinogona kusiya vakawanda vanoona vachishungurudzika.
Neraki, kune nzira nhatu dzakapusa dzekusunungura yako yaunofarira YouTube mimhanzi vhidhiyo kana terevhizheni, uye ivo vese vakasununguka uye vanobata nemapuratifomu ese, kusanganisira iPhone ne Android smartphones uye Windows, Mac, uye Linux makomputa.
• Maitiro 1. PaYouTube: kurudyi-dzora hwindo revhidhiyo uye dzvanya kuLop
• Maitiro 2. Pa YouXube:
- Tsvaga vhidhiyo uchishandisa bhokisi rekuisa riri pamusoro peji, wobva wasarudza imwe vhidhiyo kubva pane yemhedzisiro runyorwa.
- Kopa URL yevhidhiyo yeYouTube yaungada kuvhura uye isa iyo URL yeYou vhidhiyo mubhokisi rekuisa riri pamusoro peji wobva wadzvanya infinity icon ∞
- Kopa ID yevhidhiyo iwe yaungade kuvhura uye isa ID yeYou vhidhiyo mubhokisi rekuisa riri pamusoro peji wobva wadzvanya infinity icon ∞
• Nzira 3: Isa iyo Yemahara Yemahara app pane iPhone, iPad, kana iPod kubata (kune zvakare YouTube zvidzokororwo zvemahedzisiro eApple).
+ Maitiro Ekurongedza YouTube Vhidhiyo kubva kune Web Browser?
Pane nzira yekuona YouTube mavhidhiyo yakakwirira kupfuura 2x kumhanya?
⓵ Parizvino, YouTube inongomhanyisa kutamba kwevhidhiyo 2 times.
⓶ Dzvanya-kurudyi nzvimbo yemavhidhiyo, kana -refu-mudhara kana uchishandisa touch screen.
⓷ Sarudza Loop kubva kumenyu.
Kubva panguva ino zvichienda mberi, vhidhiyo yacho icharamba ichimhanyisa kudzamara uchidzima chiuno, izvo zvaungaite nekungodzokorora nhanho dziri pamusoro apa kusunungura sarudzo ye loop, kana nekuzorodza peji.
+ Sei kusunungura YouTube mavhidhiyo pane iPhone kana iPad pasina kuisa iyo application?
Pane pakombiyuta kana palaptop, YouTube inokubvumira kuti udzokorezve vhidhiyo yauri kuona. Uyezve, kune emahara, chechitatu-bato masevhisi anogona kukubatsira iwe kudzokorora mavhidhiyo.
Kana iwe uchida kuyedza imwe nzira yekusunungura YouTube mavhidhiyo pakombuta kana uri kushandisa chishandiso chakadai sengeidhi iyo isingaratidze yakavanzika menyu sarudzo, iyo yeYeXube webhusaiti yakanaka imwe nzira.
YouXube iyi yemahara webhusaiti iyo inobvumira chero munhu kuti atange kudzokorora yeYou vhidhiyo chete nekupinda iyo URL yevhidhiyo mumunda wayo wekutsvaga. Zvakanakisa zvezvose, izvi zvinogona kuitwa mune chero webhu browser pane chero chinhu.
+ Ini ndinotevedzera sei uye ndinoisa YouTube URLs pane nharembozha?
Pakombuta, unogona kukurumidza kukopa chinongedzo neyeya yekhibhodi nzira Ctrl + C uye namatidza chinongedzo nekhibhodi kapfupi Ctrl + V.
Pane imwe nharembozha, tinya uye ubate uye wobva wasarudza kopi kana kuisira sarudzo.
+ Ino peji inoenderana here neYouTube?
Iri peji haribatanidzwe neYouTube.
Saiti iyi haisi yekubatirana neYouTube uye iyi haisi iyo nzira yepamutemo yekutamba YouTube mavhidhiyo pakudzokorora, ingori yechitatu bato sarudzo.
+ Kwakachengeteka here kushandisa ino YouTube yekudzokorora sevhisi?
Kuchengetedza ndiko kukoshesa kwedu kwekutanga, saka neyese data data yeiyi webhusaiti SSL yakavharidzirwa. Neiyo yakachengeteka network protocol, data rako rakachengetedzwa kubva pakuwana nevechitatu mapato.
+ Is stutting YouTube vhidhiyo, iwe uchiri kuzviona?
Kutangazve bhurawuza rako.
Tarisa mashandisiro eCPU komputa yako kana foni kana piritsi. Kana iwe ukaona yakanyanyisa (kupfuura 80%) edza kuuraya mamwe maitiro, kana kutangazve kifaa chako.
Kana zvichikwanisika chinja kumhando yepasi yevhidhiyo yeYouTube (480p kana yakaderera).
+Sei Kuona YouTube Mavhidhiyo muSlow Motion kana kukurumidza Kufamba?
Nzira yekuchinja sei vhidhiyo yekutamba yeimhanyisa paYouTube?
Tevedza nhanho idzi
Vhura chero vhidhiyo yeYouTube mune browser rako
Tarisa kuzasi-kurudyi kwemutambi kune yakagadzirirwa cog (inogona kuti HD pamusoro payo)
Dzvanya pane Speed ​​sarudzo (inofanira kunge iri pane Chairo nekusarudzika)
Sarudza yako yekumhanyisa kumhanya
Wedzera Speed: 1.25, 1.5, 2
Nenzira imwe chete, iwe unogona kuvhura vhidhiyo paIyexube, iyo ine mabhatani maviri ekuwedzera kana kuderedza kumhanya mumurongi.
Iyi ndiyo zvakare mhinduro kune mimwe mibvunzo yakafanana.
Nzira yekumhanyisa sei kana Kupunzika pasi YouTube Vhidhiyo?
Maitiro ekuona YouTube mavhidhiyo pamhanyisa anomhanya?
Tinogona here kuwana kuwedzera kune yekutamba yekumhanyisa sarudzo?
Sei Kutamba YouTube Mavhidhiyo muSlow Motion kana Fast Motion?
+ Nzira yekumhanyisa Sei YouTube Mavhidhiyo (2x, 3x uye kupfuura 4x)?
Parizvino, YouTube inongomhanyisa kutamba kwevhidhiyo 2 times.
+ Nzira yekuchinja sei YouTube Playback Speed ​​pane Android uye iPhone?
Tisati tatanga, ita shuwa kuti uende kuApp Store kana Google Play uye udzore kune yazvino vhezheni yeYouTube app.
Vhura chero vhidhiyo yeYouTube muapp
Tinya vhidhiyo kuti uone mabhatani ese akafukidzwa pane iyo skrini
Tinya matanho matatu mukona yekurudyi rekona yako. Izvi zvichazarura bhuroka remavhidhiyo marongero.
Mune iyo rondedzero yezviratidziro, tevera Playback Speed. Iyo inofanirwa kuiswa kune yakajairwa nekusika.
Ingotuta pane kumhanya kwaunoda, uye mese makaiswa.
Paunenge uchiri parunhare mbozha kana iPhone, kana ukasarudza kutamba YouTube mavhidhiyo panharembozha yewebhu player (m.youtube.com) pachinzvimbo chepo chenzvimbo mbozha app, saka unogona kuchinja chinzvimbo cheYouTube kuva YouXube.
+ Nzira yekukwevha sei vhidhiyo ye youtube kubva pane imwe pfungwa?
Iwe unosunungura sei Youtube vhidhiyo pakati pemapuranga nguva?
Dhonza masiraidhi muWhatsApp kudzokorora kukanda chete chikamu chevhidhiyo.
+ Maitiro ekurongedza Youtube playlist pane mobile?
Vhura chero playlist yeYouTube mune browser rako
Chinja iyo YouTube domain ive YouXube uye imi mese makaiswa.
Chakareruka YouTube vhidhiyo looping chishandiso
Kugadzira iyo Loop haina kumbobvira nyore! Inoitisa otomatiki kutsiva ye YouTube vhidhiyo kana chikamu chayo ...
Great app, zvishwe ndiyo yakanyanya kubatsira yekudzidza zvikamu zvengoma kutamba kana kuimba.
Kutaura-Mutauro Pathologist, London
Ndozvandaive ndichitsvaga kudzokorora zvikamu zvemimhanzi pandinenge ndichiridza pamwewo kudzidzira. Iyo yekugovana chikamu ichave yakanaka kugovera zvikamu zvevhidhiyo nevamwe mune chero mudzidzi / bhendi / kirabhu boka.
Mudzidzisi Wepamusoro Chikoro, Paris
Ini ndinoshandisa iyi app kugadzira playlists yemaitiro angu maitiro. Unogona kudzokorora track imwe chete kana kusarudza auto-play inoita kuti uterere mimhanzi yese iripo mumutambo wekutamba. Kuvimbika application.
Ruzivo rwekuchengetedzeka Kweruzivo, Silicon Valley
Ini ndinoda maitiro aungagadzira loop pakati yakatarwa nguva yevhidhiyo! Chaizvoizvo chikamu chandinofarira cheapp.
Ida iyi app! Inoita kuti kuve nyore kwazvo kusunungura nziyo dzangu dzandinoda!
Advisor wezvemari, Amsterdam
Ndozvandaida. Semudzidzi wemimhanzi, ndinogona kuteerera nziyo dzandiri kuedza kudzidza pa loop ndisina kurova play kakawanda.
Ini ndinoda kuti kana vhidhiyo yakareba sei kupfuura iwe yaunoda, iwe unogona kuitapudza. NDINODA IZVI. Hapana glitches kana kushambadza, ini handioni chikonzero chekuda icho.
Ichi chiitiko chikuru chinoshanda sezvakatsanangurwa. Ini ndinofara kwazvo nezvayo uye ndingazvikurudzira.
Mimhanzi yandinoda uye kuiisa muchiuno inongondigutsa uye inondibatsira kuzorora.
Nyanzvi yemasvomhu, Barcelona
Ida iyi app inobatsira zvikuru kana iwe usingakwanise kuwana yakawedzerwa rwiyo rweunoda iwe pa YouTube ndinokutendai nekugadzira iyi App.
Parizvino, izvi ndizvo chaizvo zvandaifanira kuzvitsaura uye kuita zvimwe zvikamu zvegitare.
Psychologist, Rio De Janeiro
Ini ndinotenda anoshandisa ichi chinotyisa lokusebenza, zvinosuruvarisa YouTube haitsigire loop chimiro asi ndinotenda nekugadzira iyi App.
Computer Network Architect, San Francisco
Izvo zvakanaka kune vatanga sezvo vanogona kuisunungura uye vodzidza rwiyo nyore
Inoshanda zvakanaka kumavhidhiyo ese kwete mimhanzi chete.
Maneja wemari, Florence
Inodzokorora isina kumira saka ndogona kurara zvakanaka
Mota mechanic, Toronto
Yakanakira hurukuro mitauro uye kudzidza zvakare. Ini ndinokwanisa kudzora kukurumidza kwekutamba kana resolution.
Kugovera iyi webhusaiti inokurudzira chishandiso chekuvandudza zvimwe zvakawanda zvinobatsira
Ndatenda nekushandisa kwedu service!
© YouXube 2019 - Vadivelu Comedy Youtube Player 0.0.1